Manoratra i Tiorkia….. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2018 7:41 GMT
Eny, nantenaiko ny mba hahita fanehoankevitra avy amin'ireo blaogera Tiorka ho valin'ilay fanambaran'ny Repoblikan'i Tiorkia ny fikasany hiampita ny sisintaniny any Iraka mba hanenjehana ireo mpampihorohoro PKK (toy ny notaterina tamin'ity herinandro ity mikasika an'i Kurdistance tao amin'ny GV), na izany aza, nahita filazana kely momba izany ihany tao amin'ny tontolon'ny blaogy Tiorka aho. Mamoaka rohy mankany amin'ny fanehoankevitra mikasika ilay fanambarana ny Field Diary an'i Erkan. Milaza momba ilay Fifandirana ao Afovoany Atsinanana amin'ny ankapobeny ny Aydin.net, fa ankoatra ireo fidirana blaogy roa ireo, tena vitsy ireo zavatra hafa mikasika izany lohahevitra izany tamin'ity herinandro ity. Ankoatra izany, tena herinandro nangina be ity tao amin'ny tontolon'ny blaogy Tiorka/Anglisy….izao no noresahin'izy ireo:
Namoaka ny lahatsorany mikasika ny fanavakavahana ara-pananahana ao Tiorkia (izay nipoitra tao amin'ny Washington Post) ny The White Path tamin'ity herinandro ity. Toa mamolavola politika vaovao ny Diyanet mikendry ny hiverina handinika ireo Hadith Silamo mba hanafoanana ny fanavakavahana ara-pananahana sy ny fomba fijery tafahoatra momba ny vehivavy. Ny antenaina dia ny hoe hahazo sitraka avy amin'i Eoropa ilay firenena Silamo vaovao liam-pivoarana.
Nanohy tamin'ny fandrakofany ilay fifidianana an-dRtoa.Tiorkia ao anatin'ilay Fifaninanana Vehivavy Tsara Tarehy Indrindra Manerana Izao Tontolo Izao ny Talk Turkey…jereo ity lahatsoratra ity mba hahazoana vaovao bebe kokoa mikasika ny fomba hifidianana izay ankafizinao. (tapaka ny rohy)
Tsy ela akory izay, voadonan'ny fiara i Amerikan Turk, ilay mpitaingina bisikiletantsika…soa ihany fa nanao ny fiarovan-dohany izy ary toa tsy haninona. Sitràna haingana namako!
Manoratra mikasika ilay fitsapankevi-bahoakany tsy mahagaga nataon'ireo mpamakiny mikasika ny Tompondaka Maneran-tany ny The Round Ball in Ankara.
Ary ny Metroblogging: lasa be fangorahana an'i Istanbul i Istanbul ary manoratra mikasika ny fahasarotana amin'ny fividianana gorondona taila ho an'ny efitrano fandroana miaraka amin'ny fahaizana voafetra ananan'ny Tiorka.
2. ”Sahiko Ny Milaza Fa Tsy Fantatro Ny Fizarana Faha-16” avy amin'i Mavi Boncuk mikasika ny Arom-baravarankely Venetian…sy ny Varotra Venetian ao Istanbul Fahiny.
3. Kanto sy Fanimbàna Zava-tsarobidy avy amin'ny ISBN 9760806.